Waa Tee Kooxda Ugu Dhaawacyada Badan Horyaalka Ingiriiska. – Radio Daljir
Maarso 30, 2017 3:20 b 0
Arsenal iyo Manchester United ayaa ah kooxaha ugu dhaawacyada badnaa lixdii sanno ee ugu danbeysay sida lagu ogaatay baaris ay sameysay Sky Sports.
Wadar ahaan, ciyaartoyda Arsenal waxa ay dhaawacyo ku maqnaayeen 10,285 maalmood tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii 2011-12, halka Manchester United ay dhumisay 9600 maalmood.
Sky Sports ayaa eegtay dhaawac kasta oo ay diiwaangelisay PhysioRoom.com tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkii 2011-12 ilaa iyo kulamadii ugu danbeysay, waxaana ay xisaabiyeen maalmaha ay ciyaartoyda dhaawaca ku maqnaayeen inta ay xilli ciyaareedyada socdeen.
Liverpool ayaa martigelin doonta Everton Sabtida, waxaana ay labada kooxood ee Merseyside ay ku jiraan liiska dhaawacyada, iyadoo Everton ay 8,058 maalmood ay dhaawacyo ku weysay ciyaartoy, halka Reds ay tahay 8.044.
Kooxaha ka soo muuqday Premier League lixdii sanno ee ugu danbeysay, Chelsea ayaa ah kooxda ugu dhaawacyada yareed, iyadoo wadar ahaan ay 4559 maalmood ay dhaawacyo kaga maqnaayeen ciyaartoy.
Dhanka kale, Swansea ayaa ah kooxda labaad ee ugu dhaawacyada yar (5,111 maalmood), waxaa soo raaca West Brom (5,851), Manchester City (6,023) iyo Stoke (6,607).
Wadarta maalmaha ay dhaawacyada ku maqnaayeen ciyaartoy intii lagu guda jiray xilli ciyaareedyada tan iyo 2011-12
Sunderland ayaa ah kooxda ay dhaawacyada diloodeen xilli ciyaareedkan iyadoo wadar ahaan ciyaartoyda dhaawacyada kaga maqnaa ay seegeen 1761 maalmood, waxaa soo raaca West Ham (1,574), Hull City (1,434), Watford (1,388) iyo Crystal Palace (1,385).
Taas bedelkeeda, xilli ciyaareedka cajiibka ah ee ay ku jirto West Brom ayaa waxaa caawiyay in kaliya wadar ahaan 389 maalmood ay ciyaartoy dhaawacyo kaga maqnaayeen, halka kooxda hogaanka heysa ee Chelsea ay wadar ahaan 444 maalmood dhaawacyo kaga maqnaayeen ciyaartoyda.
Arsenal ayaa wadar ahaan 1,038 maalmood waxa ay dhaawac ku weysay ciyaartoyda, iyadoo Santis Cazorla (150 maalmood), Aaron Ramsey (117 maalmood) iyo Per Mertasacker (166 maalmood) ay muddo dheer dhaawacyo kaga maqnaayeen.
Ciyaartoyda Manchester United ayaa wadar ahaan dhaawacyo ku maqnaa 787 maalmood iyadoo Phil Jones (90), Luke Shaw (84), Henrikh Mkhitaryan (81), Eric Bailly (59) iyo Chris Smalling (58) ay dhaawacyo ku maqnaayeen.
Daawo-Wasiir Maryam Qaasin Oo Dirtay Farriin Qiira Badan Oo Ku Aadan Xaaladda Abaarta